Alternative Software in Edit iyo qoraaga DVDs My on Mac
> Resource > Video > Sidee ayaan Edit karaa iyo qoraaga DVDs My?
Ma waxaad had iyo jeer la sixiddiisa aad videos on ka mid ah software ka dibna sii wado si ay u yihiin qorayaasha ah ee DVD ah ku software kale duwan? Waxaa laga yaabaa in waxa la joogaa wakhtigii si aad u eegto kale qaar ka mid ah. Waxaa hubaal ah kuu baaqanaya waqti dheeraad ah iyo kharashka hadii ay jirto hal software in dhammaan kuu sameyn karo, gaar ahaan aad Mac.
Mida fursadaha kala duwan ee ah software qoraalka Jochen tafatirka, waxaana lasoo xulay saddex kale oo aad u. Waa ay Adobe Premier Qaybaha 12 (Alternative 1); VideoPad Master ee Edition 3.02m (Alternative 2) iyo Wondershare Video Converter Ultimate (Alternative 3) .
Fiiro gaar ah : Dhamaan kale oo ay la jaanqaadaan u download iyo rakibidda labada PC Windows ama Mac ka hawlgala.
Alternative 1: Adobe jilitaankii Qaybaha 12
Alternative 2: VideoPad Master ee Edition 3.02m
Out oo ka mid ah saddex kale oo ku xusan, ee Adobe jilitaankii Qaybaha 12 waa wax yar ka dhib badan in la isticmaalo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dhoofsadaan ilaa 99 videos ama kuwan raadkaygay audio iyo aad dooran kartaa in aad iyaga u aragto labada waqtiga ama hab storyboard. Software Tani waxay sidoo kale bixisaa in ka badan qaababka tafatirka caadiga ah sida digsiga iyo zoom, cagaaran tafatirka screen, polish audio, Faydi Hum iyo wax ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad weli u baahan tahay in waqti waxoogaa kor u qaadaan sida bilaabayso. Waxaa sidoo kale jaban dhamaadka sare ee heerka ugu $ 99.99 (haddii aad tahay qof user hadda version hore ee Adobe jilitaankii Qaybaha, fadlan weydiiso binta casriyayn ah). Laakiin, waxaa la tixgeliyaa qabsado wanaagsan kuwa raadinayso muuqaalada dheeraad ah oo ku ganaaxi-habayn video ama audio files ay, gaar ahaan hal madal kaliya. Waxa kale oo aad si fudud u abaabuli karaan faylasha aad by shaqada tagging sameeyey heli karo.
Waxaad ka heli doontaa ugu VideoPad Master ee Edition in ay wax yar ka fudud si ay ula qabsadaan u tiro la mid ah lacagta ku qaatay (sidoo kale qiime jaban ah $ 99.99). On top of in, aad si fudud u jiidi-iyo-hoos u dhac kartaa files warbaahinta. Kale badan ganaax-aad 'reebi files warbaahinta, waxa kale oo aad u beddesho kartaa 2D videos galay oo ka fudud iyo mashquuliya 3D video clip ah.
Si kastaba ha ahaatee, ma heli doontid kala guurka sida ugu badan ama saamaynta in la shakhsiyeeyo haddii la barbardhigo jilitaankii Adobe canaasiirta 12. Sidaas oo ay tahayna, ayaad ugu qorayaasha karo iyo gubi kuu gaar ah DVD marka aad ku dhameysatay kaalinta shuqullada tafatir ah. Qaybsiga ayaa isku dhafan gal dhufto ee warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale karti, sida YouTube, Facebook iyo iwm
Haddii aad bilaabayso in ay raadinayaan kale ah ma-wax-u dhib badan si ay u fahmaan, ugu Wondershare Video Converter Ultimate for Mac noqon doonaa mid ku haboon. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa aad videos, waxaa loogu badalo 3D, dalban kala guurka gaar ah, saamaynta, sawir-in-sawir, subtitles, gubi kuu gaar ah DVD iyo iwm ee nus ka mid ah qiimaha kaliya (waa hadda iibka ee $ 59.95). Ka dib markii tijaabo ah oo u dhexeeya dhammaan saddexda kale, waa iska cadahay in interface Wondershare ee waa ugu user-friendly. Wax kale oo aan ahayn, qaababka bixiyeen waa ku filan ka mid ah ayaa u baahan tafatirka aad u raba haddii ay u isticmaalaan xirfad leh.
Talaabada 1: Files ama DVD Upload
Dejinta files ama DVD aad si kastaba ha ahaatee in aad jeclaan; jiidi--iyo hoos u dhac ama u geliyaan mid mid; ama iyada oo loo marayo download si toos ah uga siiyaa biraawsarkaaga. Riix Edit button oo qaadi karaan talaabada 2.
Talaabada 2: Faalladaada
Dalagyada ama jar aad video clips, Nuurkii qabsato, saturation, midabka ama mugga; gelisaa watermark gaar ah ama subtitles; ama si fudud u kor loogu qaado la doorashada ugu badan ee saameynta iyo kala guurka dhisay-in.
Talaabada 3: Koobiyee ama Guba DVDs
Waxaad dooran kartaa in aad nuqul ka mid ah ama gubi DVDs kuu gaar ah. Waxa kale oo jira kala duwan marto meesha aad dooran kartaa sida aad DVD menu.
Fiiro gaar ah : Watch ama ka akhriso Casharrada u Hanuuniye faahfaahsan oo dheeraad ah.